निमेष अस्पतालले बिरामीहरुलाई प्रभाबकारी सेवा दिँदै
कन्चनपुर -निमेष अस्पतालले बिरामीहरुलाई गुणस्तरिय सेवा दिँदै आएको छ । कन्चनपुरको कृष्णपुरमा बिगत लामो समय देखी सेवा दिँदै आएको उक्त अस्पतालले आफ्नो सेवा थप बिस्तार गर्दै आएको छ । १ करोडको लगानीमा खुलेको अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा सहितको सेवा दिइरहेको अस्पतालकी प्रवन्ध निर्देशक गीता चौधरीले बताईन ।
उनका अनुसार २४ सो घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, ओपीडी सेवा, इसीजी सेवा, विशेषज्ञ सेवा, प्रयोगशाला, रंगिन भिडियो एक्सरे लगायतका सेवा अस्पतालले स्थानीय जनतालाई दिँदै आएको छ । स्थानीय ठाउँमा अस्पताल खुलेपछि यहाँका नागरिकहरुलाई सहज भएको स्थानीय अर्जुन चौधरीले बताए।
अहिले यँहाका नागरिकहरुलाई अब उपचारको लागी धनगढी महेन्द्रनगर नेपालगन्ज जाने वाध्यता हटेको उनिहरुले बताएका छन । अस्पातलले आर्थिक अबस्था कमजोर भएका नागरिकहरुको उपचारमा पनि सहयोग गर्दै आएको अस्पतालका संचालक डा. फुलराम चौधरीले बताए ।
कृष्णपुर नगरपालिका ६ का स्थानीय थारु समुदायका अगुवा डा. फुलराम चौधरी र गीता चौधरीले अस्पताल सन्चालन गरिरहेका छन ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार २, २०७९, १४:१६:००